အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ 1 အနက်မှ 1
အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို ရောဂါဆိုတာ အင်ဆူလင် လုံးဝမထုတ် ဒါမှမဟုတ် လုံလောက်အောင် မထုတ်နိုင်တာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များတဲ့ ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးလေးမှာ အမျိုးအစား (၁) ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေပြီလို့ သိလိုက်ရပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ပြင်ဆင်စရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီကလေးအတွက် စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေ၊ ဆေးဝါးတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဝင်မလာအောင်၊ ရောဂါပိုဆိုးမလာအောင် စသဖြင့် တတ်ကျွမ်းသူဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပြုစုပေးရမှာပါ။ ဆီးချိုရောဂါဟာ အမြစ်မပြတ်တဲ့ အတွက် ကလေးကို တစ်သက်လုံးစောင့်ရှောက်ရမှာမို့လို့ နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုပါတယ်။ ကလေးကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင် ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးကြမလဲ။ ကလေးကို ကျန်းမာအောင် ဆီးချိုရောဂါရဲ့ အခြေခံအချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်း စတာတွေနဲ့ ပြုစုပေးရပါမယ်။ ဒါ့ပြင် ကလေးကို ရောဂါကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ခြင်း မရှိအောင်လည်း အားပေးပျိုးထောင် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းကာလတွေမှာတော့ မိဘရော ကလေးပါ အသားမကျသေးလို့ ပင်ပန်းနိုင်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားသွားရင်တော့ သူများတွေလိုပဲ ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစု […]
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ • 28/09/2020
သင့်ကလေးငယ်မှာ အမှတ်တစ် အမျိုးအစားဆီးချိုရောဂါရှိနေရင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
Diabetes Mellitus Type 1 (အမျိုးအစား ၁ ဆီးချို )
အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ခွဲမွေးခြင်းနဲ့ ကလေးသူငယ် အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုနဲ့ ဘာကြောင့် ဆက်စပ်မှုရှိတာလဲ
လေ့လာမှုတွေအရ ဆီးချို type 1 ဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်လာတာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗိုက်ခွဲကလေးမွေးတာကလည် အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဗိုက်ခွဲကလေးမွေးတာက ကလေးရော ိခင်ရော အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက် မကြာခဏလုပ်ရပါတယ်။ ဆီးချို type 1 ဆိုတာဘာလဲ ? ဆီးချို type 1 က ဘဝရဲ့အစောပိုင်းတွေမှာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေမှာ တွေ့ရများတာပါ။ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေက ဒီဆီးချိုကိုခံစားနေရပါတယ်။ လူတွေမှာ ဆီးချို Type 1 ရှိတဲ့အခါ glucose တွေကိုချေဖျက်ဖို့ အင်ဆူလင်မထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့သွေးထဲမှာ သကြားဓါတ်တွေပိုလာပြီးသွေးချိုလာပါလိမ့်မယ်။ မကုသဘဲထားတဲ့ ဆီးချို type 1 က ဘေးဖြစ်နိုင်တဲ့ ရှုပ်ထွေးမုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး သေဆုံးတဲ့ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးခွဲမွေးခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲ ? ကလေးခွဲမွေးတဲ့အခါ သင့်ကိုနာကျင်မှုသက်သာစေဖို့ ထုံဆေးသို့မဟုတ် မေ့ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ ထုံဆေးကို သင့်ခါးနောက်အောက်ပိုင်းကနေထိုးပါလိမ့်မယ်။ ထုံဆေးအစွမ်းပြပြီဆိုရင် […]
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်Juvenile Diabetes (ကလေးတွင် ဖြစ်သော ဆီးချိုရောဂါ) ကဘာလဲ။ ကလေးဆီးချိုရောဂါသည် သကြားဓါတ်ကို ဆဲလ်ထဲသို့ သွင်းပြီး စွမ်းအင်ထုတ်နိုင်ရန် လိုအပ်သော ဟော်မုန်းဖြစ်သော အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို မုန့်ချိုအိတ်မှ မထုတ်နိုင်သော သို့မဟုတ် နဲနဲပဲထုတ်နိင်သော အခြေအနေဖြစ်သည်။ ဆီးချို အမျိုးအစား ၂ သည် ခန္ဓါကိုယ်မှ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို လုံလောက်စွာမထွက်သည့် အခါ သို့မဟုတ် အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို မတုံ့ပြန်သည့်အခါ တွင် ဖြစ်သည်။ များစွာသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဆီးချို အမျိုးအစား ၁ ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအချို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ သည် ကလေးများနှင့် လူငယ်များတွင် အဖြစ်များသော်လည်း လူကြီးများတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသနများစွာပြုလုပ်ထားသော်လည်း ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ ကိုပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်သေးပါ။ သို့သော် ၎င်းကို သက်သာစေရန် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ […]
ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား (၁)ဆိုတာဘာလဲ ? ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား (၁)က သင့်ရဲ့ကိုယ်ကိုအစားအစာတွေဆီက စွမ်းအင်ယူလို့မရအောင် ဟန့်တားတဲ့နာတာရှည်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ လူရဲ့ခန္ဓါကိုယ်က အင်ဆူလင်အလုံအလောက်မထုတ်တဲ့အခါ ဖြစ်လာပါတယ်။ အင်ဆူလင်က သွေးထဲကရတဲ့သကြားဓါတ်ကို ထိန်းချုပ်တာကြောင့် မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိတဲ့သူတွေက သွေးထဲမှာသကြားဓါတ်အများအပြားရှိပြီး ဆဲလ်တွေဆီ အဲဒီသကြားဓါတ်တွေကို အလုံအလောက် မထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး။ ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား (၁)က အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူငယ်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ မိန်းမတွေထက် ယောက်ျားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် အသက် ၁၂ နဲ့ ၁၅ ကြားမှာ စဖြစ်လေ့ရှိပြီး အသက်၃၀ အောက်ကစဖြစ်တာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား (၁)ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာလဲ။ • မကြာမဏ ဆီးသွားခြင်း • ရေအရမ်းငတ်ခြင်း • မကြာခဏ ရောဂါပိုးကူးခြင်း • ကိုယ်အလေးချိန် ကျမြန်ခြင်း • ပင်ပန်းပြီး အားနည်းသလိုခံစားရခြင်း ကုသမှုမခံထားတဲ့ဆီးချိုရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ • […]
ကစီဓါတ်စားသုံးမှုနဲ့ အင်ဆူလင်နဲ့ မျှတတဲ့ စားသောက်မှုကို ပြုခြင်းဟာ အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို ရောဂါသည်တွေအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုစာ။ ကစီဓါတ်ဟာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ကစီဓါတ်ဟာ ပရိုတိန်းနဲ့ အဆီဓါတ်တွေနဲ့စာရင် ဆီးချိုရောဂါကို ပိုပြိး အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ အမျိုးအစား (၁) ရောဂါမှာ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ သွေးထဲကသကြားဓါတ်ကို မယူနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါ သွေးထဲက သကြားဓါတ်ဟာ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဒါကို မကုသရင်၊ ကစီဓါတ်ပါတာတွေ စားနေရင် သကြားဓါတ်ဟာ ပိုပြီး မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစား (၁) ဆီးချိုရောဂါသည်ဟာ သွေးထဲက သကြားဓါတ်ကို ထိန်းပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို နေ့စဉ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကုသတဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်တခုကတော့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ထိန်းထားနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် သင်စားနေတဲ့ ကစီဓါတ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး တွက်ဆပေးဖို့ပါပဲ။ ကစီဓါတ်တွက်ဆဖို့ ၂ခု […]
အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို ကျွမ်းကျင်သူ